Dahaarka - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Fumax waxay ku dabakhidoontaa Coating shirkii PCB ee codsiyada macaamiisha.
Nidaamka dahaadhku badanaa waa muhiim inuu ka ilaaliyo looxyada qoyaanka iyo wasakhda (taas oo sababi karta in koronto ka daadato). Waxyaabahani waa kuwa loo isticmaalo habka qoyaanka sida musqusha, jikada, codsiyada banaanka… iwm.
Fumax waxay leedahay shaqaale xirfad leh iyo qalab loogu talagalay rinjiga
Daahan waa filim adag oo isdaba-joog ah oo lagu helo codsi hal-mar ah. Waa lakab khafiif ah oo balaastig ah oo lagu daboolay substrate sida birta, dharka, balaastigga, iwm si loo ilaaliyo, loo daboolo, loo qurxiyo iyo ujeedooyin kale. Dahaadhku wuxuu noqon karaa gaas, dareere, ama adag. Badanaa, nooca iyo xaaladda lakabka ayaa lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo substrate-ka lagu buufinayo.
1. Hababka ugu badan:
2. Korontada Ni / AU
3. Dhexgalka Tin
4. OSP: Oragnic Solderability Muxaafad
2. Waxqabadka dahaadhka:
Ka ilaali qoyaanka iyo wasakhda (taas oo sababi karta daadashada korontada);
U adkaysata buufinta milix iyo caariyaysi;
Ka-hortagga daxalka (sida alkali), waxay hagaajineysaa iska caabbinta kala-baxa iyo isku-buuqa;
Hagaajinta caabbinta daalka ee kala goysyada bilaa rasaasta ah;
Xakamee qaanso iyo dheecaan halo ah;
Yaree saameynta gariirka iyo naxdinta farsamada;
Adkaysiga heerkulka sare, sii daa walbahaarka sababtoo ah isbeddelka heerkulka
3. Codsiga daahan:
Iskuxirka SMT & PCB
Xalka Xalka Xidhmada Xirmooyinka Dusha Sare
Xalka Daaweynta PCB
Xalka Xakameynta Qeybaha
Alaabada elektarooniga ah ee la qaadan karo iyo qaybo
Iskuxirka LED iyo codsiga
Xalka Daahida Guddiga PCB
4. Astaamaha geedi socodka:
Marka la eego habka loo maro dusha sare ee PCB, soo saarayaasha PCB waxay had iyo jeer la kulmaan caqabadda isku dheelitirka wax soo saarka, qalabka, maalgashiga shaqaalaha iyo amniga. Isla mar ahaantaana, waa inay tixgeliyaan arrimaha sharciyeynta iyo arrimaha deegaanka ee hawsha ku lug leh. Hababka dusha sare ee dahaadhka ah, sida qashin-qubka iyo ku buufinta qoriga hawada, waxay badanaa u baahan yihiin alaab sare (talooyin iyo qashin) iyo kharashyada shaqaalaha (shaqo badan iyo badbaadada badbaadada shaqaalaha). Maaddooyinka dusha sare ee aan lahayn dareeraha ayaa kordhiya kharashyada.
5. Faa'iidada daahan:
Xawaaraha buuxa waa dhakhso.
Waari kara oo lagu kalsoonaan karo.
Xaqiijinta xulashada wanaagsan (qeexitaanka geeska, dhumucda, waxtarka) ayaa lagu gaari karaa.
Softiweerku wuxuu taageersanyahay in la badalo qaabka lagu buufinayo gobolka duulimaadka, waxtarka xereentuna waa mid tayo sare leh oo lagu buufiyo.